एनआरसी कार्यान्वयनको खर्चबारे भारतीय गृहमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग - Jhilko
एनआरसी कार्यान्वयनको खर्चबारे भारतीय गृहमन्त्रीले तत्काल जवाफ दिनुपर्ने माग
काठमाडौ । भारतका गृहमन्त्री अमित शाहलाई एनआरसीको कार्यान्वयनमा पर्ने खर्च बारे जानकारी नै नभएको देखिएको छ । राजनीतिक नारा फलाँके जस्तै बहुमतको भरमा कानुन बनाएर देशमा उत्पात मच्चाउने गृहमन्त्रीले यसको खर्च बारे जनतालाईलाई जानकारी गराउनु पर्ने मा राहुल पाण्डेले अमित शाहसँग गरेका छन् । पाण्डेले ‘डज अमित शाह इभन अन्डरस्टयान्ड ह्वाट एनआरसी विल कस्ट?’ शीर्षकमा एक आलोख लेखी जानकारी माग गरेका हुन् । भारतलाई यसबाट पर्ने आर्थिक भारका अतिरिक्त यसको मानवीय संकटको जोखिम गहिरो र गम्भीर हुने समेत उनले त्यसमा उल्लेख गरेका छन् ।
नागरिकतामा गरिएको संशोधन कानुन (सीएए)को विरोधमा देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ भने अर्को तर्फ नागरिक दर्ता गराउनु पर्ने प्रावधान एनआरसी विरूद्ध पूर्वोत्तर भारतमा थप आक्रोश र अनिश्चितता उत्पन्न गराएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले यी दुई विषय एक आपसमा नजोडिएको स्पस्ट पार्ने गरेको छ ।
तर सरकारले एनआरसी वास्तवमै चाहेको हो भने यसको स्पस्ट मार्गचित्र जनता समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । यससम्बन्धमा सरकारले तीनवटा सवालको जवाफ जनतालाई दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो एनआरसीको कार्यान्वयन गर्ने समय सीमा कहिलेसम्म हुने, जुन व्यक्तिले आफूलाई नागरिक भएको खोजिए अनुसारको माग आधारमा प्रमाणित गर्न नसके उनीहरूलाई के गर्ने? प्रमाणित नभएकाहरूलाई के गर्ने ? उनीहरूलाई भारतको हिरासत गृहमा राख्ने हो ?
गृहमन्त्री अमित शाहले यो एनआरसी देशभर कार्यान्वयन गर्ने भनेका छन् । असामको १९ लाख मानिसलाई हिरासत शिविरमा राख्न खबौं रूपियाँको आवश्यकता हुने । बंगलादेशीहरूलाई मात्र हिरासत शिविरमा राख्न खबौं रूपियाँको आवश्यकता हुनेछ । खर्च एकातिर हुनेछ भने अर्कोतर्फ लज्जास्पद मानवताको जोखिम हुनेछ ।
गृहमन्त्री शाहले प्रमाण जुटाउन नसक्नेलाई कहा फाल्ने बारे स्पस्ट जानकारी दिएका छैनन् । राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले नागरिकता संशोधन कानुनलाई पारित गरेका छन् । तर यो मामिलामा न्याय पाउन अदालतमा छ । ठीक यही बेला भारत भर यसबारे प्रदर्शन भडकिएको हो ।
नागरिक भएको पुष्टि गर्ने आधारमा आमाबाबुको वंशावली मागिएको छ । सत्ताधारी भाजपाले यो कानुन कार्यान्वयन भन्दा पनि यसको आधारमा वर्षौसम्म राजनीति गर्ने कार्ड बनाएको मात्र देखिन्छ । १३० करोड भारतीयहरूको एनआरसीका लागि चाहिने भनेको दस्तावे प्रमाणित गराउन करोडौं भारतीयहरूलाई ७ दशक अघिदेखि थाँतथलो छोडेको ठाउँमा फर्किनुपर्ने पुर्खालाई खोज्नु पर्ने र त्यसको प्रमाण ल्याउनुपर्ने हुन्छ । कतिपयका पुर्खाहरू नै मेटिसकेको अवस्थामा उनीहरूको पारिवारिक वंशावली खोज्ने मानवीय झन्झट आइपुगेको छ । यसका लागि उनीहरूले गर्ने खर्च ठूलो हुनेछ भने मानवीय संकट त झन ठूलो हुनेछ ।
आसाममा विगत १० वर्षमा ५२हजार मानिस परिचालन गरी गरिएको एनआरसी अभ्यास खर्च १६ अर्ब भारु भएको थियो । यो खर्च मात्र प्रशासकीय खर्च हो । यसैलाई आधार मानेर १३० करोड मानिसको खर्चलाई आंकल गर्ने हो भने ५ खर्ब भारू हुनेछ । यो भन्दा ठूलो समस्या गृहराज्य मन्त्री किरेन रिज्जुले सन् २०१६मा गरेको दाबी अनुसार २ करोड बंगलादेशी भारतमा बसिरहेको आधारमा उनीहरूसँग कस्तो व्यवहार गर्ने ? गृहमन्त्री शाहले स्पस्ट पार्नुपर्ने हुन्छ ।
सन् २०१७मा यो सरकारले ६सय अवैध बंगलादेशीलाई फर्काउन सकेको जनाएको थियो । यही आधारमा फर्काउने हो भने बंगलादेशीहरूलई फर्काउन कति वर्ष लाग्ने हो ? आसाम सरकारले सेप्टेम्बर २०१९मा हिरासत गृह स्थापना गर्न शुरू ग¥या । ३ हजार जतिलाई गोलपारा जिल्लामा यो हिरासत गृह स्थापना गरियो । यसको लाग ४५ करोड भारु खर्च गर्ने अनुमान ग¥यो । यही आधारमा आसाममा १९ लाख मानिसका लागि यस्तो हिरासत गृह स्थापना खर्च २ खर्ब ८५ करोड भारु खर्च हुनेछ ।
झन् २ करोड बंगलादेशीहरूको लागि हिरासत गृह बनाउन २देखि ३ लाख करोड भारुको खर्च हुनेछ । हिरासत शिविर मात्रै बनाएर पुग्दैन उनीहरूलाई त्यहाँ खान बस्न चाहिने वस्तुको मासिक एक जनालाई पर्ने खर्च १५००का दरले खर्च त झनै ठूलो हुनेछ ।
यस्ता विषयको जवाफ गृहमन्त्री शाहले जनतालाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पान्डेले मा गरेका हुन् ।
पाँच करोडको खानेपानी योजना शुरु
ग्यास भन्दा बिजुलीमा खाना पकाउन सस्तो हुने गरी नयाँ दर...
यो प्रस्तावलाई प्राधिकरणले मगंलबार विद्युत् नियमन आयोगमा पठाउने भएको छ ।
सुनको भाउले बनायो नयाँ रेकर्ड, तोलाको ८२ हजार सात सय
सुन मङ्गलबार तोलाको ८२ हजार सात सय रुपैयाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले...
प्रचण्डबाट भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको फार्मेसी उद्घाटन
अस्पतालले सञ्चालन गरेका दुई वटा फार्मेसीको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै उनले अस्पतालले...
कम बोल्ने देश, जनता र नेतृत्वको पक्षमा 'लुरुलुरु गोरु जसरी जोतिने', चकाचौध प्रचारमा...